Important theme to be aware of: A sense of purpose | Mycanvas
Important theme to be aware of: A sense of purpose
[Work and Task]
“Work(အလုပ်)” နဲ့ “Task(လုပ်ငန်းတာဝန်)”အကြားခြားနားချက်ကို သင်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးရှင်းပြနိုင်ပါသလား? စီးပွားရေးသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ထိုနှစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်ကို သင့်စိတ်ထဲ စွဲမြဲစွာမှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။ “Task” ဆိုတာကတော့ အလုပ်မှာ သင့်ရဲ့ Supervisor တွေ ပေးတဲ့တာဝန်တွေကို သင်မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။ Task ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်မှာ Work နဲ့ မတူညီတဲ့ Passive Attitude တွေပါဝင်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ “Work” ဆိုတာက‌တော့ Customer တွေ, Client တွေ နဲ့ လူမှုဝန်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်တဲ့ သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေ နဲ့ သင်လုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ သင့်ရဲ့ လုပ်အားအကျိုးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် “Work” ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဟာ “Task” ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ကွာခြားလှပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာကနေ သင်စိတ်ကူးမိတဲ့အတိုင်း သင်ဟာ သင့်ရဲ့ Achievement တွေကို Task ကမဟုတ်ပဲ Work ကနေသာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုထားရှိရန်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက် ၃ခုရှိပါတယ်။
ပထမဦးစွာ သင်ဟာအသေးစိတ်ကျကျပြင်ဆင်တတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်စွာမပြင်ဆင်နိုင်လျှင် အရာရာတိုင်းဟာ ကိုယ်မျှော်လင့်ထားသလိုမဟုတ်ပဲပြောင်းလဲသွားနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းပြောင်းလဲမှုတွေပြီးတဲ့နောက် သင်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ သင်ဟာ Work Flow ကိုနားလည်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးသမားတိုင်းဟာ Work Flow အတွက်သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခန်းကဏ္ဍများမှ ပါဝင်ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုနေရာ ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လုပ်ဆောင်ရသလဲဆိုတာကို သိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်ခွင်မှာသင့်ရဲ့ တည်ရှိနေမှုကိုနားလည်ထားခြင်းဟာ သင့်ကိုတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်စေပြီး လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကို ပိုမိုစွမ်းဆောင်နိုင်စေပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင့်ကိုယ်သင် “ငါဒါကိုဘာလို့လုပ်သင့်တာလဲ?” လို့ ထပ်ကာ ထပ်ကာ မေးခြင်းက သင့်အတွက် အလွန်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာအောင်မြင်တဲ့ Automobile အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Toyota ကုမ္ပဏီ က သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မိမိကိုယ်ကို ပြန်မေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ သူတို့ရဲ့ အလုပ်လုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မှာ အာရုံစိုက်စေပြီး အမှားများကိုလည်းလျော့နည်းစေတဲ့အတွက် မိမိတို့ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကဏ္ဍကို မြတ်နိုးလာစေပါတယ်။
လူငယ်စီးပွားရေးသမားအများစုဟာ အကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိပဲ ရာထူး ဒါမှမဟုတ် လစာ တိုးမြှင့်ခံရဖို့ အဓိကထားမျှော်မှန်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာ သူတို့ရရှိထားတဲ့ Social Status တစ်ခုကိုသာအရေးပေးတာနဲ့တင်ရပ်တန့််သွားပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်း အလုပ်ခွင်မှာ အရေးကြီးဆုံးကတော့ သင့်ကိုယ်ပိုင Role နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရည်အချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေဘယ်လောက် လုပ်‌ဆောင်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင်ရော သင့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကဏ္ဍသင့်ရဲ့ ကုမ္ပဏီမှာဖြစ်တည်မှု အပေါ်မှာမူတည်တာလား? လူမှုဝန်းကျင်မှာဖြစ်တည်မှုအပေါ် မူတည်တာလား? သင့်တန်ဖိုးကိုမဟုတ်ပဲ ရာထူးကိုပဲ အာရုံမစိုက်လိုက်သင့်ပါဘူးနော်..ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ မူလအစိတ်အပိုင်းတွေ စွမ်းရည်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ကောင်းကောင်းရှိထားဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်နော်…